more ...Ugu awoodda badan phpBB XTE 4.3
Abuur gole bilaash ah
Xulo magaca koontada (hoosaadkaaga) oo geli cinwaanka e-maylkaaga. Xusuusnow in lambarkaaga furaha ah ee maamulaha loo soo diri doono cinwaanka emaylkaaga. Waligaad nagama heli doontid e-mayl spam ama xayeysiino anaga. Si kastaba ha noqotee, way dhici kartaa in e-maylka leh lambarkaaga furaha ah ee maamulaha uu ku yimaado faylkaaga spam.
Nidaamka madasha ee otomaatiga u ah ayaa sameyn doona kulankaaga bilaashka ah ilbiriqsiyo gudahood. Isla markiiba waad geli kartaa oo wax walba waad maamuli kartaa. Badbaadi naftaada madax xanuun badan iyo lacag iyada oo loo marayo madal bilaash ah halkii aad ku rakibi laheyd madal kulan kuu gaar ah oo ku saabsan server-kaaga! Ma aha inaad ka walwasho weerarada spam, cusboonaysiinta softiweerka, marin u helka, qarashyada taraafikada, barnaamijyada ama wax kale. Diiradda saar bulshadaada oo waxaan qaban doonaa inta hartay! Amniga xogtaada ayaa muhiim noo ah. Taasi waa sababta ay adeegyadeena ugu yaalliin Awstaraaliya sidaa darteedna ay ku xiran yihiin xeerarka ilaalinta xogta adag. Waad ku mahadsan tahay beesheena gaarka ah, bartaada waxaa soo booqan kara kumanaan xubnood isla marka ay isqoraan. Golahaaga wuxuu diyaar u yahay inuu si dhakhso leh u bilaabo ka dib soo galida isla markaana si fudud loo habayn karo sidoo kale.
Magaca Koontada [A-z iyo 0-9]: .webboard.org
Abuuristaada waad aqbashaa Rabbiga Shuruudaha isticmaalka.
Nidaamka madasha ee otomaatiga u ah ayaa sameyn doona kulankaaga bilaashka ah ilbiriqsiyo gudahood. Isla markiiba waad geli kartaa oo wax walba waad maamuli kartaa. Badbaadi naftaada madax xanuun badan iyo lacag iyada oo loo marayo madal bilaash ah halkii aad ku rakibi laheyd madal kulan kuu gaar ah oo ku saabsan server-kaaga! Ma aha inaad ka walwasho weerarada spam, cusboonaysiinta softiweerka, marin u helka, qarashyada taraafikada, barnaamijyada ama wax kale. Diiradda saar bulshadaada oo waxaan qaban doonaa inta hartay! Amniga xogtaada ayaa muhiim noo ah. Taasi waa sababta ay adeegyadeena ugu yaalliin Awstaraaliya sidaa darteedna ay ku xiran yihiin xeerarka ilaalinta xogta adag. Waad ku mahadsan tahay beesheena gaarka ah, bartaada waxaa soo booqan kara kumanaan xubnood isla marka ay isqoraan. Golahaaga wuxuu diyaar u yahay inuu si dhakhso leh u bilaabo ka dib soo galida isla markaana si fudud loo habayn karo sidoo kale. Shuruudaha adeegsiga astaanta ayaa la adeegsan doonaa.